Posted by ကို Tranquillus | ဇန်နဝါရီ 6, 2018 | ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွမ်းကျင်မှု, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရည်အသွေးတွေနှင့်ပင်ကိုသဘာဝရှိသည်! သို့သော်ကျွန်တော်တို့အဘယ်သူသည်တကယ်လည်ပတ်? ကျနော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ပင်? ပိုကောင်းတဲ့အောင်မြင်ပါကသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိဖို့ရန်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါနှင့်အချိန်ကယ်ဖို့သင်ယူပါ။
သင်သည်သင်၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေသင်ယူဖို့အချိန်ဖြုန်း; , Know-ဘယ်လောက်ဖွံ့ဖြိုးသိကြ-ဖြစ်ခြင်းကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိပေမယ့်အဘယျသို့အပ်ပေးသည်ကိုသင်တို့အဘယျသို့မိခင်သဘာဝကော? သင်အထဲမှာအဘယျသို့ရှိသနည်း
ဥပမာအားမြင်ယောင်ကြည့်ပါ, သင်သည်သင်၏အနာဂတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအစီအစဉ်များဘို့လမ်းကိုလုပ်ချင်, ဒီအမှု၌, သင် redoubliez အားထုတ်မှုယူမည်ဖြစ်ကောင်းရည်ရွယ်ချက်သင်တို့အဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ သင်သည်သင်၏သဘာဝအခွက်ကြိုးစားခဲ့အစား အကယ်. ? ဤသည်သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းကို, အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုယူခွင့်ပြုထား! ထိုကြောင့်သင်သည်ဧကန်အမှန်ဒုတိယလမ်းကြောင်းယူလျော့နည်းအချိန်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပေသည်။
တစ်ဦးကစိတ်ခွန်အားနိုးသောဗီဒီယို2မိနစ်! သူမသည်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကြီးတွေ key ကိုခြေလှမ်းများကိုငါပေးမည်။
ဒီဗီဒီယိုထဲမှာသင်ရုံ5အချက်များအတွက်အချိန်ချွေတာနေစဉ်အတွင်းသင့်ကျွမ်းကျင်မှုသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်ကိုရှာဖွေ ... အပေါင်းတို့နှင့်ကြောင့်ပါလိမ့်မယ်:
1) သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု : သင်ရှိသည်, သူတို့ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်!
2) ကအဘိုးပြတ် သင်၏စွမ်းရည်ကိုပြသခြင်းမရှိပါကသင့်အတွက်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမျှလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
3) ဇုန်သာလွန်ကောင်းမွန်မှု : စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုး!
4) Focus အဆိုပါအာရုံစူးစိုက်မှုသင့်ကျွမ်းကျင်မှုမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးပါမည်။
5မိမိကိုယ်ကိုထက်) သာ. ကောင်း၏ : ဒီငြင်းဖြစ်ပါသည်, သငျသညျအမွဲအကောင်းဆုံးထဲကနေလေ့လာသင်ယူ, ကောင်းစွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝန်းရံ။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုခေါင်းပုံဖြတ်ရန်မဟုတ်ဘူးလား? မေလ 12th, 2018Tranquillus
လွန်ခဲ့သောSignal တွင်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်သူ့ကြောက်လန့်-ကွောကျရှံ့ခွငျး၏ Pass
အောက်ပါExcel ကိုသင့်ရဲ့ Productivity သိကောင်းစရာများအပိုင်း-တိုးမြှင်